Njani. i-backlinks edu iyakuchukumisa indawo yakho ye-SEO?
I-backlink i-Edu ithathwa njengeyona nto ibaluleke kakhulu njengoko ivela kwizizinda ezithembekileyo nezihloniphekileyo. Ngokuqhelekileyo zisetyenziswe iikholeji, iiyunivesithi, izikolo eziphakamileyo kunye namanye amaziko emfundo. Njengoko bezisa inani kubasebenzisi, iGoogle iyabaxabisa kwaye iphakamileyo phezulu kwi-SERP.
Kuthatha ixesha elininzi kunye neenzame zokufumana ukufikelela kwiinqununu kwiiwebhusayithi. Nangona kunjalo, inzuzo kukuba akufanele ukuba ngokucacileyo ube yingcali kwintsimi ethile yemfundo ukuze ufumane i-backlink kuso kwisiza sakho.
Ukuba unzima ukufumana umgangatho. thumela i-backlinks kwiwebhusayithi yakho, eli thunyelwe liza kuba luxabisekileyo kuwe njengokuba ndibutha apha zonke iindlela zokuthengisa izakhi zoonxibelelwano.
Iintlawulo ze. i-backlinks
iGoogle iyayixabisa yonke i-edu. kwiimimandla kwaye emva koko kuya kutsala indawo yakho njengento encedisayo kakhulu xa ufumana izixhumanisi zangaphandle ezivela kule mimandla;
Yonke imithombo yewebhu yemfundo iphezulu yexabiso kwaye ixabise inani kubasebenzisi;
Ukubeka ikhonkco yakho. kwisizinda se-edu, uya kufumana iindawo ezininzi ezijoliswe kuyo eziza kuba lula ukuguqula;
Fumana ixabiso lewebhu kunye nenyaniso.
Indlela yokwakha umgangatho. backlinks?
Ukuseka ubudlelwane obuhle kunye neeyunivesithi nezikolo eziphakamileyo, unako ukubonelela abafundi babo ngemali kunye neengxowa-mali.
Ungaqala ukuqhuba uphando lwewebhu kumaziko emfundo nge-Google okanye ezinye iziteshi zendawo ezingakunika ulwazi olufanelekileyo kumbuzo wakho. Qinisekisa, isikhungo semfundo oyikhethayo sininzi leendwendwe okanye ubuze ukuba iyunivesiti okanye isikolo sinomphakathi. Finyelela kubantu abaphetheyo kuluntu. Ngokusekelwe kwishishini lakho okanye iimveliso ozithengisayo, unokubonelela. izixhobo zoncedo ngeentlobo ezahlukeneyo ngokubuyisela kwi-backlinks. Ngokomzekelo, ukuba uthengisa izixhobo zemidlalo, unganika uncedo lwabafundi abaphumelele kwimidlalo. Ukuba unako ukufumana i-backlink encinci ukusuka. umthombo wewebhu we-edu owona ubuncinane kwi-niche yakho yemakethe, kwaye ungeze ixabiso elingaphezulu kwiprofayili yakho ye-backlink.
Ukubonelela izaphulelo kubafundi
Ukuba uthengisa iimveliso ezithile ezinokuba luncedo kubafundi kwiimfuno zabo zemihla ngemihla, unokuzama ukufumana i-backlink ngokubuyisela izaphulelo. Ukubonelela abafundi abaneziphakamiso ezikhethekileyo kunye nezipho. Iimveliso zakho zinokumiswa okanye ukuyila iprojekthi eziza kunceda abafundi ekuphandeleni izifundo zabo. Kufuneka ucele umphathi weyunivesiti ukuba ashicilele isipho sakho kwiwebhusayithi yeziko.
Yakha umxholo oza kuba nomdla kubafundi
Awuyi kufumana i-backlinks esemgangathweni, ngakumbi. kwiisayithi ze-edu, ukuba umxholo wakho wewebhusayithi unayo nayiphi na ixabiso kubafundi. Akukho mntu ufuna ukufundwa ngokuqinisekileyo.
Uninzi lweziko lemfundo ligcina iiblogi kubafundi. Unokucela ukuba ushicilele amanqaku akho afanelekileyo kunye nophando kule bhulogi okanye uthumele iimpendulo ezinengqiqo kumbuzo wabafundi Source .